Myanmar OA6: Blog များကို ဖြတ်သန်းခြင်း
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 11:56 AM
အကြွေးစာရင်းထဲမှာ မုန့်ကျွေးရန် တစ်ခါလို လို့ ရေးမှတ်ထားလိုက်မယ်..
weee.. Happy blog day to you.. Happy blog day to you!!!!
မောင်ပွတ်ရေ.. အမအကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်ပြီး သိပ်တောင် မနေတတ်ဘူးး) အမစလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးရှည်လေး အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ အမှတ်တရလေး ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်း)
အမဘလောဂ့်ကို ခုလို အချိန်ပေး သေချာဖတ်ပေးတာတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ် ။
ဘာညာက မောင်ပွတ် ၃လပြည့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့..း) မောင်ပွတ်က ယောက်ျားဆိုတော့ ကလေးလည်း မွေးမဖြစ်ပါဘူးလို့ စဉ်းစားနေတာ .. ဘလောဂ့် ၃လပြည့်ဆိုတာ ခုမှသိတယ် ။
မောင်ပွတ်ရဲ့ ဘလောဂ့်လေး နောက်များသော နေ့ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
မောင်ပွတ် ဘလော့ ၃လမှသည် ၃နှစ် အနှစ် ၃၀ အနှစ် ၃၀၀ မက ရှည်ပါစေသော်ဝ်။
အဲဒီလို တာဝန်ယူဖတ်ကြသလား။ ပန်ဒိုရာတို့ ဘလော့တွေ ဘယ်သူလာဖတ်ဖို့ တာဝန်ကျပါလိမ့်။
ခုလိုမျိုး ဘလော့ဂါတွေကို မောင်နှမသဖွယ် ခိုင်းနှိုင်းပြီး ရေးပြထားတဲ့ ကိုမောင်ပွတ်ရဲ့ စာသားလေးတွေကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ သိမ့်ခနဲ စိမ့်ခနဲ အေးခနဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ.
May 14, 2007 at 2:32 AM